IMARA.UQALISO lokuqalisa olulinganisa ifuthe lokusingqongileyo- iGeofumadas
IiphotographycadastreGeospatial - GIS
Kuhlelo lwe-6 lwe Iphephancwadi iTwingeo, saba nethuba lodliwanondlebe no-Elise Van Tilborg, uMseki-mbumba we-IMARA. Ukuqalisa kwesiDatshi kutshanje kuphumelele uMceli mngeni wePlanethi eCopernicus Masters 2020 kwaye uzibophelele kwilizwe elizinzileyo ngokusetyenziswa kwendalo.
Isilogeni sabo sithi "Jonga impembelelo yakho kwindalo esingqongileyo", kwaye bayenza ngedatha yokuqonda kude njengemifanekiso yesathelayithi kunye nokuqokelelwa kolwazi ebaleni ukuze bafumane ulwazi olunenjongo lokucwangciswa, ukubeka iliso kunye nokuvavanywa kweeprojekthi zokubuyiselwa komhlaba. Eminye yemibuzo eboniswe kudliwanondlebe iqala ngokungaqiniseki kwe Yintoni u-Imara. IMARA, okuthetha ukuzinza, ukomelela kunye nokuqina esiSwahili, kugxile ekulinganiseni ifuthe kwindalo esingqongileyo ngobugcisa bokubhala amabali ukwenza ucwangciso lweprojekthi olomeleleyo, ukubeka iliso kunye nokwenza ingxelo.
I-IMARA ayisiyo nkampani iqhelekileyo yokujonga kude okanye inkampani yonxibelelwano.
I-IMARA Umhlaba kunye nemfuneko ekhuthaze indalo yawo. U-Elise kunye neqela lakhe baphawule ukuba bayalibona inani ledatha elifumanekayo kwimibutho kwaye ayisetyenziswanga ngokuchanekileyo, bexhaphaza i-100% yamandla alo. Ngesi sizathu, bathathe isigqibo sokuyila le nkampani ukuze inyange idatha phantsi kwemigangatho yokujonga kunye nokuvavanya, ukongeza kufakelo lwemifanekiso ukuvelisa ulwazi olupheleleyo noluchanekileyo lokusingqongileyo.
U-Elise usixelele ukuba enye yezizathu zakhe zokudala i-IMARA yayiyimbono yakhe yokuba idatha yejografi kufuneka isetyenziselwe ukuxhasa iiprojekthi ezomeleza ikamva elizinzileyo lomhlaba. Yena kunye nomsunguli wakhe uMelisa kwizifundo zoLawulo loMhlaba naManzi, eza kuthi kamva zincediswe ngesiGanga se-Master kwi-GIS nakwi-Remote Sensing,
Imifanekiso idityaniswe nolwazi oluyinyani lwendawo leyo ikhokelela kulwazi kunye nolwazi oluchanekileyo nolunenjongo ngexesha lokucwangciswa, ukubeka iliso kunye nokuvavanywa kweeprojekthi zokubuyiselwa komhlaba.
Njengakwezinye iinkampani, ubhubhane uchaphazele imisebenzi yabo kancinci, kodwa bakwafumene ezinye iindlela zokuqhubeka nayo, ngokubandakanya abahlali emsebenzini wasentsimini kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zokuqonda okwenyani. Konke oku kungentla kukhokelele kubume obanzi bokujonga kunye nokuvavanya okukhokelele kwinkqubela phambili yenkampani. E-IMARA bazinikele ekubuyiseleni umhlaba, ekukhuthazeni imisebenzi yokubuyisela kunye nokumisela ifuthe lale misebenzi ngokudibanisa ulwazi lokwenyani ukusuka kwindawo kunye nedatha yokuqonda ekude.
Ukuqonda okukude kuye kwangqineka kuluncedo kuwo onke amanqanaba ophuhliso lweprojekthi kwaye ayisiyiyo kuphela yokulinganisa iimpembelelo zodwa.
Ungandwendwela iinethiwekhi zentlalo ze-IMARA apha LinkedIn okanye iwebhusayithi yakho IMARA ukuhlala unolwazi ngayo yonke imisebenzi yakho. Okungakumbi kukukumema ukuba ufunde olu hlelo lutsha lweTwingeo Magazine. Siyakhumbula ukuba sinomdla wokufumana amaxwebhu okanye iimpapasho onqwenela ukuzibonisa kwiphephancwadi. Nxibelelana nathi nge-imeyile editor@geofumadas.com kunye edit@geoingenieria.com. Imagazini ipapashwa kwifomathi yedijithali-jonga apha-Ulinde ntoni ukukhuphela iTwingeo? Silandele kwi-LinkedIn ukuze ufumane ezinye iinkcukacha.
Ukuqhelaniswa nokuqeshiswa kwi-GIS. Iingqungquthela ngokuchasene nenyaniso